Mitady ny dikan'ny fiainana any amin'ny toerana tsy mety ve ianao? - Fanahy
Tsy isalasalana aho fa ny olona velona rehetra dia maniry ny hahita dikany amin'ny fiainany, fa izy ireo ve - ary ianao - dia mitady amin'ny toerana tsy izy mihitsy? Ary ny valiny ve dia mibanjina antsika?
Fantatr'ireo izay namaky ny tantarako momba ny fanampiana ahy manokana, mpankafy lehibe ny asan'ny mpitsabo aretin-tsaina Viktor Frankl aho ary mifantoka amin'ny fahitana dikany ho fomba iray hiatrehana ny fisondrotana sy ny faran'ny fiainana. Eny tokoa, tsy azoko atao ny mahita ny dikany, na ny tsy fisian'izany, amin'ny finoana sy ny fihetsiky ny olona, ​​na amin'ny fiainako na amin'ny tontolo midadasika.
manasonia ny anao taloha tadiavinao hiverina
Saingy ny fikatsahana ny dikany matetika dia ady mafy ataon'ny olona satria tsy fantatra eo no ho eo hoe aiza no tokony hahitana azy io. Ny olona sasany dia mitady harena, ny sasany amin'ny fahefana, ny sasany amin'ny fikatsahana fahafinaretana amin'ny vidiny rehetra, ary ny sasany kosa milavo lefona fotsiny.
Misy mahazatra ve izany?
Ny maha-olombelona dia manondro hatrany, ary mitarika, amin'ny zavatra na olona iray, hafa noho ny tenanao - izany dia midika hoe fanatanterahana na olona hafa mifanena aminy.
Frankl, izay sisa velona tamin'ny toby fitanana nazia, dia nilaza fa avy amin'ny loharano roa voalohany ny dikany:
Ny fitiavana an'ny hafa.
Antony lehibe kokoa noho ny tenanao.
Hifamaly aho eto fa ny faharoa amin'ireo dia fanitarana fotsiny ny voalohany sy izay, na izany aza hitanao tanjona eo amin'ny fiainanao , hiverina foana amin'ny fitiavana misy eo aminao sy ny fanahy hafa izany.
Inona fotsiny no antony lehibe kokoa noho ny tenanao?
Rehefa miresaka momba ny antony mety ahitanao ny dikany i Frankl dia mino aho fa fitiavana na angovo no ilazanao azy. ovay ho tsara kokoa izao tontolo izao . Nanatsoaka hevitra izy fa ny antony toy izany dia tokony ho ivelan'ny fiainanao amin'ny teny hafa, tsy azonao atao ny mamorona ny fahombiazanao na ny fahasambaranao ho tanjon'ny fihetsikao.
Ny fahombiazana, toy ny fahasambarana, tsy azo enjehina fa tsy maintsy ho avy.
Nantsoiny hoe io transcendence tena io izay midika ara-bakiteny mihoatra ny tena. Io fomban-kevitra io dia manohitra mifanohitra amin'ny zavatra inoan'ireo mpandinika lehibe maro hafa - toa an'i Freud sy Nietzsche - izay milaza fa ny làlan-kizorana mankany amin'ny fahasambarana sy ny hevitry ny olombelona dia amin'ny alàlan'ny fikatsahana anaty toy ny fahafinaretana sy hery.
Ohatra amin'izany ireo antony fanaovana asa soa mahazatra toy ny fanampiana amin'ny fanalefahana ny fahantrana, ny fanasitranana ny marary, ny fisorohana ny aretina, na ny fanabeazana ny tanora. Na mety zavatra toa ny fisorohana ny fahasimban'ny tontolo iainana, ny fanasongadinana ny kolikoly politika, na koa ny fifohazan'ny olona eo amin'ny fiaraha-monina sy ny fananganana tena vondrom-piarahamonina.
Na inona na inona tranga misy, ny tanjona faratampon'ny fandraisan'anjaran'ny olona iray amin'ny raharaha dia tsy tokony ho ny dikany manokana.
Tazomy, ka milaza ianao fa afaka mahita dikany aho amin'ny alàlan'ny fanomezana ny tenako ho antony iray, fa tsy afaka ny hanome ny tenako ho antony iray aho amin'ny antony hanomezany ahy dikany?
Eny, izany indrindra no lazainay sy Frankl. Tsy afaka mahita antony tsotra fotsiny ianao, mandray anjara amin'izany ary manantena fa tototry ny fifaliana sy ny dikany ny fiainanao. Tokony ho vonona hanao sorona noho ny antony ianao, tokony hihazona a tena fitiavana ho azy, ary tsy tokony hanantena valiny ianao.
zavatra folo tokony hatao rehefa mankaleo anao
Amin'izay fotoana izay vao afaka mahita lalana mankany aminao.
Ny fanoloran-tena ho an'ny antony dia fitiavana tsy miova
Ny hevitro, araka izany, dia izao: na inona na inona antony atokanao ny tenanao, ny antony anaovanao izany dia miverina amin'ny fitiavanao olon-kafa. Saingy, teo am-piezahako hatao mazava amin'ny fanamafisako etsy ambony, io fitiavana io dia eo anelanelanao sy ny fanahy hafa, tsy voatery hoe eo aminao sy ny olon-kafa.
Eny, maro ny antony mitarika amin'ny fiadanan'ny olombelona hafa, fa misy ihany koa, na dia tsy betsaka aza, izay mifantoka amin'ny endrika fiainana hafa. Ny fitiavana azon'ny olona iray ampisehoana amin'ny tontolo voajanahary midadasika dia tsy latsa-danja noho ilay azontsika ampisehoana.
(Tiako ihany koa ny manamarika fa ny antony ara-pinoana na ny hafa hafa noho ny fiatrehana ireo sehatra any ankoatr'ity tontolo ity dia vavahady manan-danja ihany koa raha toa ka mifototra amin'ny fitiavana.)
Noho izany, na miasa ianao amin'ny fananganana sekoly ho an'ny ankizy sahirana any amin'ny tany an-dàlam-pandrosoana na miady amin'ny fiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina tena ilaina ao amin'ny ranomasina dia mampiseho fitiavana ny fanahy izay mihoatra ny anao manokana ianao.
Ny fitiavana no tanjona avo indrindra azon'ny olombelona irariana.
Viktor Frankl dia nino fa ny herin'ny fitiavana hitondra dikany ho an'ny fiainantsika dia lehibe tsy azo lavina ary mifanaraka tanteraka aminy aho. Ny fahitana an'io fanahy io azonao omena ny fitiavanao manontolo no lakilen'ny fiainana feno.
Ka ity no mametraka ny fanontaniana:
Tokony hanontany isika hoe 'iza' fa tsy 'inona' no dikan'ny fiainana?
aho tsara fihavanana tenako Manonona
shane mcmahon vs ilay mpiandraikitra
vady conan o-brien
lazao anay ny zava-misy mahaliana momba ny tenanao